१० किलो सुनसहित भारतको सिलिगुडीबाट ‘राजा’ पक्राउ ! – Everest Dainik – News from Nepal
१० किलो सुनसहित भारतको सिलिगुडीबाट ‘राजा’ पक्राउ !
२०७५, २६ असार मंगलवार
काठमाडौं, असार २६ । नेपालीहरु सुनसहित भारतमा पनि पक्राउ पर्न थालेका छन् । शनिबार मात्रै भारतको सिलिगुडीबाट एक जना नेपाली नागरिक १० किलो सुनसहित पक्राउ परे ।
चर्चित ‘हुन्डी र सुन कारोबारी’ सन्तोष जैनका छोरा ‘राजा’ भनिने सौरभ १० किलो सुनसहित शनिबार पक्राउ परेका हुन् ।
वीरगंज महानगरपालिका वडा नं-६ रेशमकोठीका बासिन्दा सौरभ र उनका चालक दिलीप चौरसियालाई भारतको राजस्व निर्देशनालय (डिआरआई) को टोलीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । सिलीगुडीबाट मुज्जफरपुर आउने क्रममा फुलवाडी-घोषपुकुर सडकखण्डबाट दुबै जनालाई पक्राउ गरिएको भारतीय संचारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
पक्राउ परेका दुबैलाई आइतबार अदालतमा पेस गरी न्यायिक हिरासतमा राखी अनुसन्धान हुँदैछ। पक्राउ परेका जैन र चौरसियासँग नेपाली नागरिकता फेला परेको अन्सन्धान टोलीले जनाएको छ ।
भारत बिहार, राज्य, पूर्वी चम्पारण घर भएका जैनले ०६३ सालमा नेपाली जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका हुन् भने चौरसियाको वंशजको नागरिकता छ । सौरभ जैन वीरगंजमा भएको हुन्डीकाण्डका फरार अभियुक्त हुन् । ०७३ सालमा जैन निवास वीरगंज-६ रेशमकोठीमा पर्सा प्रहरीले छापामारी गर्दा अवैद्ध रूपमा वित्तीय कारोबार गरेको घटना सार्वजनिक एको थियो । त्यस बेला जैन निवासबाट स्रोत नखुलेको २ करोड ३२ लाख नगद, तथा विभिन्न बैंकको चेक बरामद गरिएको थियो ।
प्रहरीले तत्कालीन अवस्थामा सौरभका पिता सन्तोष जैन, आमा उषा जैन र भाई विक्की जैनलाई पक्राउ गरेको थियो। ४ करोड धरौटीमा रिहा भएका जैन परिवारमाथि अहिले पनि मुद्दा विचाराधीन छ । हुन्डी मुद्दामा सौरभ पहिले पनि भारतकै सिलिगुडीमा पक्राउ परी प्रहरीको हिरासतबाट फरार भएका थिए ।
ट्याग्स: १० किलो सुन, Gold baramt, सौरभ १० किलो सुनसहित शनिबार पक्राउ
अटोरिक्सासँग ठोकिएर बस इनारभित्र पस्दा २७ जनाको मृत्यु
प्रचण्डको प्रश्नः पीडितले कहिलेसम्म पैसा तिरेर रगत लिनुपर्ने ?
मोबाइल चार्ज गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर मृत्यु
नेकपाको राष्ट्रिय महाधिवेशन २०७७ चैत्त २५ देखि ३० गतेसम्म गर्ने प्रस्ताव
बोलेरो र मोटरसाइकल ठोक्किँदा श्रीमान्–श्रीमतीको मृत्यु, छोरा घाइते
चितवनमा एकै दिन दुई गैँडा मरे
आफ्नै जन्मदिनमा बुबा बने हाँस्य कलाकार ‘तक्मेबुढा’
कोरोनाभाइरसः चीनबाट विदेशीको उद्धार शुरू, के गर्दैछ नेपाल ?